Chikumbiro chinokumbira Disney kudzivirira 'Game of Thrones' vatarisi pakuparadza 'Star Wars' - BGR - TELES RELAY
HOME » ENTERTAINMENT Chikumbiro chinokumbira Disney kudzivirira 'Game of Thrones' vatarisi pakuparadza 'Star Wars' - BGR
Chikumbiro chinokumbira Disney kudzivirira 'Game of Thrones' vatarisi pakuparadza 'Star Wars' - BGR
Panguva yekunyora uku, pedyo ne800 000 fans yemutambo wezvigaro vakanga vasaina chikumbiro cheShand.org vachikumbira HBO kuti vadzokere zvakare munguva ye8 "nevanyori vane kodzero". Iyo mharidzo pane chikumbiro yaiva joke. asi yakakura nekukurumidza uye hazvingashamisi kuona vanhu vakawanda vachichiisa. Mushure mezvose, DB Weiss naDavid Benioff vane chiitiko che Game of Zvigaro zvoumambo uyo achiri kutambudzika - uye isu tava kutoziva zvichazoitika . Icho chinopera kuti iyi haisi yega chikumbiro chakanangana neD & D, vamwe vanoda Disney kudzivirira duo kuparadza Star Wars uyewo .
"David Benioff naDB Weiss vakave vanyori vasina kukwanisa kana vasingakwanisi magwaro (mabhuku)," vanoverenga Mutambo weTrones chikumbiro. , que isu takakuratidza iwe rimwe zuva . "Nyaya idzi dzinoda nguva yekupedzisira inonzwisisika."
Icho chikumbiro chave chave chakava chetachiona uye chakaita misoro. Vakawanda vatevedzeri veD & D, HBO uye yemutambo wezvigaro munyika muno zvichida wakanzwa nezvayo panguva iyoyo. Izvi hazvirevi kuti HBO ichaita chero chinhu pamusoro payo, kunyange tichiziva kuti George RR Martin akanyatsotaura kuti panofanira kunge kune dzimwe nguva dzakawanda dze Game of Zvigaro zvoumambo kuti apedzise nyaya zvakanaka, uye HBO yakanga yakagadzirira kuzviita. Nguva ye 7 uye nguva ye8 zvose zviduku kupfuura nguva dzakare Game of Zvigaro zvoumambo asi chikamu chekupera kwevhiki ino chichava chekupedzisira nguva dzose.
Benioff na Weiss vachashanda . ipapo unoenda kune firimu, iyo inotsanangura chipiri chikumbiro chedu dui Change.org . Iyo inongova neyoyo 3 600 masayinisi panguva yekunyora, asi inogona kukura zvikuru mumazuva mashomanana anotevera. Heino mharidzo kuDisney:
David Benioff naDB Weiss vakaratidza kuti havasi ivo vanyori vasina kukwana pavakashaya mashoko, asiwo vanoda chaizvo kusiya purogiramu yapera-paya paine mamwe mapurogiramu ekupedzisira. Kukudza kwavo chete tsika hakuiti kuti vakwanise basa iri.
Kune vanyori vakawanda vane tarenda uye vatori vakavimbika kune franchise vanozoita zvakanyanya nani muS star Wars nyika.
Ngatishandure zvatinotarisira, Disney!
Zvakare, izvozvo hazvirevi kuti ani zvake paDisney kana HBO achaita chero chinhu pamusoro pezvikumbiro izvi, asi ivo vanofanira kunge vachinzwa zvinotaurwa nevateereri. Mushure mezvose, izvi zviviri zvakaparadza zvachose nguva ye8 yemutambo wezvigaro iyo inogona kuva ndiyo yekupedzisira nguva inonyangadza kupfuura dzose munhoroondo yeTV. Sezvavanotaura muMambo's Landing, Dracarys!
Grumpy Cat yakafa uye Indaneti haina kuitora zvakanaka - BGR
Mutambo weZigaro vateereri vakagadzirisa zvimwe zvezvinhu zvakaipisisa mumwaka we8, uye zviri nani zvikuru zvino - BGR